Iindlela zeMarTech eziqhuba iNguqu yeDijithali | Martech Zone
Uninzi lweengcali zentengiso ziyazi: kule minyaka ilishumi idlulileyo, ubuchwepheshe bokuthengisa (IMartech) iqhume ekukhuleni. Le nkqubo yokukhula ayizukucothisa. Ngapha koko, isifundo se-2020 samva nje sibonisa ukuba zingaphaya Izixhobo zobuchwepheshe bokuthengisa ezingama-8000 kwintengiso. Uninzi lwabathengisi basebenzisa izixhobo ezingaphezu kwesihlanu ngosuku olunikeziweyo, kwaye ngaphezu kwe-20 jikelele ekuqhutyweni kwezicwangciso zabo zokuthengisa.
Amaqonga eMartech anceda ishishini lakho ukuba alubuyise kwakhona utyalo-mali kwaye akuncede ufumane ukwanda okubonakalayo kwintengiso ngokukhawulezisa uhambo lokuthenga, ulwazi olwandayo kunye nokufunyanwa, kunye nokunyusa ixabiso elipheleleyo lomthengi ngamnye.
I-60% yeenkampani zifuna ukongeza inkcitho yazo kwiMarTech ngo-2022 ukuphinda kabini ishishini labo i-ROI.
Wamkelekile, IiNdlela eziPhezulu zeMartech zowama-2021
I-77% yabathengisi bacinga IMarTech ngumqhubi ophembelela ukukhula kwe-ROI, kwaye esona sigqibo sibalulekileyo ekufuneka isenze yinkampani nganye kukukhetha izixhobo ezifanelekileyo zeMarTech zeshishini labo.
Wamkelekile, UMartech njengoMxhobisi woBuchule
Sichonge iindlela ezi-5 eziphambili zetekhnoloji yokuthengisa. Zithini ezi zinto, kwaye ukutyala imali kuzo kungasiphucula njani isikhundla sakho kwintengiso kwimeko yanamhlanje engazinzanga ye-COVID-19 kwindyikityha yokufa?
Umkhwa woku-1: Ubukrelekrele bokwenza kunye nokuFunda ngomatshini
Itekhnoloji ayimi ngxi. Kukubhadla okungeyonyani (AI) inqanaba lokuqala kuzo zonke Iindlela zetekhnoloji yokuthengisa. Nokuba ujolise kumashishini okanye abathengi, abathengisi bafuna iimveliso ezintsha kwaye bayonwabela inkqubela phambili yetekhnoloji.
I-72% yeengcali zentengiso zikholelwa ukuba ukusetyenziswa kwe-AI kuphucula iinkqubo zabo zoshishino. Kwaye, ukusukela ngo-2021, iinkampani zichithe ngaphezu kwe $ 55 billion kubukrelekrele bokufakelwa kwezisombululo zabo zentengiso. Eli nani kulindeleke ukuba linyuke nge-2 yezigidigidi.
Namhlanje i-AI kunye neML zinezibonelelo ezibini eziphambili kuzo zonke iiprojekthi ezikwi-Intanethi:
Ukukwazi ukwenza uhlalutyo oluhlakaniphile, oluya kuvumela ukuphumeza izisombululo ezisebenzayo ngakumbi
Ukukwazi ukuqinisekisa ukusebenza okuphezulu
Zonke iinkampani ezinkulu zeendaba, kubandakanya i-Instagram, iYouTube, kunye neNetflix, zisebenzisa i-AI kunye nokuFunda ngoomatshini (MLii-algorithms zokuchonga kunye nokubonisa umxholo onokubangela umdla wabasebenzisi.
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, olo hlobo lwe-ML njengee-chatbots lube yinkokeli epheleleyo phakathi kweempawu zaseMelika.
Omnye ummandla wokukhula okukhawulezayo ziincoko eziqhutywa yi-AI. Incoko sisixhobo sedijithali esinokwandisa ngokubonakalayo abafowunelwa bakho. Baqokelela kwaye bahlalutye idatha ebalulekileyo kubathengi, babuze imibuzo eyahlukeneyo kwiindwendwe, banikeze iimveliso ezintsha kunye nokukhushulwa. Ngo-2021, ngaphezulu kwama-69% wabathengi eUnited States unxibelelane neempawu nge-chatbots. Ii-Chatbots zombini zitsala abathengi kwaye zikhawulezise ukuzibandakanya - kunye nokuphuculwa kokusebenza kokufunyanwa ukusuka kwi- + 25% yokungena ukuya kokuphindwa kabini kweziphumo.
Ngelishwa, uninzi lwamashishini amancinci naphakathi- kwiminqweno yabo yokonga imali-khange bamkele iingxoxo ... baphoswe kubaphulaphuli abanokuba yinzuzo. Ukuze iincoko zisebenze ngokufanelekileyo, akufuneki ukuba zithintele kwaye zicaphukise. Ngamaxesha athile iinkampani eziye zabeka umngcipheko wobuchule bengxoxo ye-chatbot ziyabacaphukisa abathengi bazo zibatyhalele kukhuphiswano. Isicwangciso sakho sokuxoxa kufuneka senziwe ngononophelo kwaye sibekwe esweni.
Umkhwa 2: Uhlalutyo lwedatha
Uhlalutyo lwedatha luyindlela yesibini yethekhnoloji yokuthengisa amashishini atyala imali eninzi kuwo. Uphando oluchanekileyo kunye nokulinganisa kubalulekile ukufumana ulwazi olubalulekileyo lwentengiso kwiinkqubo zesoftware. Namhlanje amashishini asebenzisa amaqonga esoftware anje ibhodi, Ukuzalwa, yaye ClearStory ukuba:
Uphuhliso lweeDeshibhodi eziHlangeneyo
Yakha iNgxelo eneMpembelelo
Olu hlalutyo luphambili lunceda ukusebenzisa isicwangciso esiliqili ngokufanelekileyo kwaye siqhube izigqibo ezingcono zeshishini ngokukhawuleza nangakumbi.
Uhlalutyo lwedatha lufunwa kakhulu kwihlabathi lanamhlanje. Ivumela iinkampani ukuba zifumane idatha yohlalutyo ngaphandle komgudu omkhulu. Ngokufaka iqonga elithile, iinkampani sele zibandakanyeka kwinkqubo yokuqokelela idatha ukuphucula umgangatho. Nangona kunjalo, musa ukulibala malunga nemeko yomntu esebenzisana nohlalutyo lwedatha. Iingcali kwintsimi yazo kufuneka zisebenzise idatha efunyenwe kwinkqubo.
Umzila 3: Ubukrelekrele boShishino
Ubukrelekrele beshishini (BIInkqubo yezicelo kunye neetekhnoloji zentengiso ekuvumela ukuba uqokelele idatha yokuhlalutya iinkqubo zeshishini kunye nokukhawulezisa ukusetyenziswa kwezisombululo ezinemveliso.
Phantse isiqingatha sawo onke amashishini amancinci naphakathi asebenzisa ubukrelekrele boshishino ekwenzeni intengiso kunye nophuhliso lweqhinga.
I-Sisense, iNgxelo ye-BI kunye ne-Analytics
Ukuphunyezwa kweshishini le-BI kuxhumeke kwi-27% ngo-2021. Oku kunyuka kuya kukhula kuba ngaphezu kwe-46% yeenkampani zithi zibona iinkqubo ze-BI njengethuba elinamandla loshishino. Ngo-2021, abanini bamashishini abanabasebenzi abali-10 ukuya kwangama-200 bathi ukugxila kwabo emva kobhubhani we-COVID-19 bajike kwi-BI njengendlela yokuphila.
Ukusebenziseka ngokulula kuchaza ukuthandwa kobukrelekrele beshishini phakathi kwawo onke amashishini. Akukho mfuneko yezakhono zokucwangcisa ukuhlangabezana nalo msebenzi. Isoftware yeBI ngo-2021 ibandakanya imisebenzi ebalulekileyo, efana nale:
Tsala kwaye ulahle indibaniselwano engadingi phuhliso.
Ubukrelekrele obakhelwe ngaphakathi kunye nohlalutyo lokuxela kwangaphambili
Ukulungiswa ngokukhawuleza kolwimi lwendalo (NLP)
Umahluko ophambili phakathi kokuhlaziywa kweshishini kukubonelela ngenkxaso ekwenzeni izigqibo ezithile zeshishini kunye nokunceda iinkampani ukuba ziphuhlise. Ngaphaya koko, uhlalutyo lwedatha likuvumela ukuba uqikelele kwaye uguqule idatha kwiimfuno zeshishini.
Umkhwa 4: Idatha enkulu
Idatha enkulu yindlela ebanzi kakhulu yokuqokelela ulwazi kunohlalutyo lwedatha. Umahluko ophambili phakathi kwedatha enkulu kunye nohlalutyo lwedatha lusebenza kunye neseti enzima yedatha isoftware yemveli ayinakuyenza.
Olona ncedo luphambili lwedatha enkulu kukubonisa amanqaku eentlungu zeenkampani, apho kufuneka zichithe khona umzamo omkhulu okanye zityala imali ethe kratya ukuze ziphumelele kwikamva. I-81% yeenkampani ezisebenzisa idatha enkulu ibonakalise utshintsho olukhulu kwicala elungileyo.
IDatha enkulu ichaphazela iinkampani ezibalulekileyo zentengiso njenge:
Ukwenza ukuqonda okungcono kokuziphatha kwabaxumi kwintengiso
Ukuphuhlisa iindlela ezisebenzayo zokuphucula izicwangciso zeshishini
Ukuqonda izixhobo eziluncedo ezandisa imveliso
Ukulungelelanisa isidima kwi-Intanethi usebenzisa izixhobo zolawulo
Nangona kunjalo, uhlalutyo lwedatha enkulu yinkqubo enzima ekufuneka ilungiselelwe. Umzekelo, kufanelekile ukukhetha phakathi kweentlobo ezimbini zedatha enkulu kwimarike:
Isoftware esekwe kwi-PC eya kuthi isetyenziswe kwizibonelelo ezinjengeHadoop, Atlas.ti, HPCC, Plotly
Isoftware esekwe kwilifu yokubala ukusebenza kakuhle kwentengiso kunye nohlalutyo kwilifu elinjengeSkytree, Xplenty, Azure HDInsight
Akukho mfuneko yokuhlehlisa inkqubo yokuphumeza. Iinkokheli zehlabathi kudala zaqonda ukuba umhla omkhulu uyichaphazela njani ngempumelelo ishishini. Umzekelo ophawuleka kukusasazeka kweNetflix, ethi, ngoncedo lwedatha enkulu yokuqikelela ukusebenza kakuhle kunye nokuphucula umgangatho, igcina ngaphezulu kwe- $ 1 yezigidigidi ngonyaka.
Indlela yesi-5: Indlela yokuShukumiseka yokuqala
Asinakubuthelekelela ubomi bethu ngaphandle kweefowuni eziphathwayo. Abanini bamashishini abasoloko behoye abasebenzisi be-smartphone. Ngo-2015, uGoogle wafanekisela iindlela zale mihla, esungula i-algorithms yokuqala yeselula ukuxhasa iinguqulelo eziphathwayo zeewebhusayithi. Amashishini angazange abe nesiza esilungele ukuhambahamba aphulukane nokubonakala kwiziphumo zophendlo lwemfonomfono.
Ngo-Matshi ka-2021, inqanaba lokugqibela lesalathiso sikaGoogle sezixhobo eziphathwayo saqala ukusebenza ngokupheleleyo. Ngoku lixesha lokuba amashishini azise iimveliso zawo ze-intanethi kunye neewebhusayithi ezisetyenziselwa ukusetyenziswa kweselula.
Malunga ne-60% yabathengi ungabuyeli kwiindawo ezinokungahambi kakuhle. Amashishini kufuneka enze konke anokukwenza ukuphucula kunye nokuphucula iinguqulelo zeemveliso zawo macala onke. Kwaye i-60% yabasebenzisi be-smartphone banxibelelana neshishini ngokuthe ngqo besebenzisa iziphumo zokukhangela.
I-Mobile-first trends idibanisa ne-ML, AL, kunye ne-NLP ekusebenziseni uphando lwezwi. Abantu bafuna ukukhangelwa ngelizwi ngokukhawuleza ukufumana imveliso ethile okanye inkonzo ngenxa yokuchaneka kokukhula kwayo kunye nokusetyenziswa ngokulula.
Ngaphezu kwe-27% yabantu kwihlabathi jikelele basebenzisa ukhangelo lwelizwi kwizixhobo zabo. UGartner ubonise ukuba i-30% yazo zonke iiseshoni ze-intanethi zibandakanya uphendlo lwelizwi ekupheleni kuka-2020. Umthengi oqhelekileyo ukhetha ukukhangela ngelizwi ukuchwetheza. Ke, ukuphumeza ukhangelo lwelizwi kwiwebhu yakho kunye neenguqulelo zeselfowuni iya kuba licebo elihle ngo-2021 nangaphaya.
I-Scalers, konke okufuneka ukwazi malunga neTekhnoloji yeNtengiso
Ukucwangcisa iNguqu yakho...
Itekhnoloji yokuthengisa ihambela phambili ngokukhawuleza. Ukuze amashishini ahlukeneyo achume, uhlalutyo olukumgangatho ophezulu kunye nezixhobo ziyafuneka ukutsala abasebenzisi kwicala labo. Ukuthathela ingqalelo ezi ndlela ziphambili ze-martech, iinkampani ziya kuba nakho ukukhetha oko kuzilungele kakuhle. Iinkampani kufuneka zibeke phambili ezi ndlela xa ziphuhlisa:
Isicwangciso sentengiso esicwangcisiweyo
Uphando kunye nezixhobo zokuhlalutya
Ukufunyanwa kweetalente kunye nophuhliso lwabasebenzi
Iinkampani ziya kukhawulezisa inguqu kwintengiso yazo yedijithali kunye nentengiso ngokuphumeza ubuchwephesha bokuthengisa obuqinisekisiweyo.
tags: aiUhlalutyokukubhadla okungeyonyaniidatha enkuluukuzalwaibhodibusiness intelligenceiingxoxoecacileyoiideshibhodiUhlalutyo lwedathautshintsho lwe digitaluphandoUhlahlo-lwabiwo mali lokuthengisaitalente yentengisoItekhnoloji yentengisoIindlela zetekhnoloji yokuthengisamartechiindlela zemartechuphendlo lweselfowuniiselfowuni-kuqalaUkulungiswa kolwimi lwendalonlpuphando lwezwi
UPavel Obod ngusomashishini, umseki we Sloboda Studio, kunye nomtyali mali wezindlu. Uyakuthanda ukudibanisa noosomashishini kwaye sele eqale iiklabhu ezininzi zeshishini kwii-CEO, ukuthengisa, kunye nabaphathi beprojekthi eUkraine naseBelarus.
Eyoyikisayo… Umndilili weFanitshala yeHalloween uceba ukuchitha ngaphezulu kwe- $ 100 kulo nyaka!